Markaad Ka Iibsato Domain GoDaddy? Ma Adigaa Leh - Complete Guide
Markaad Ka Iibsato Domain GoDaddy? Ma Adigaa Leh
Waqtiga akhriska:3 Daqiiqado akhri
Macno malahan inaad magac domain ka iibsato GoDaddy ama adeeg bixiyeyaasha kale, si joogto ah uma yeelan kartid. Farsamo qofna uma qalmi karo. Waa inaad bixisaa lacag si aad uhesho domainkaaga ka dib mudada gaarka ah.
Waad haysan kartaa magaca domain ugu badnaan 10 sano, intaa ka dib waa inaad cusbooneysiisaa. Si aad u sii cad, iibsashada domain waxay la mid tahay iyo qaadashada iyo bixinta kirada dhismaha. Ma lahaan kartid dhisme laakiin waa inaad bixisaa kharashka bil kasta isticmaalkiisa.
Waxyaabo kale ayaa ah in dadka isticmaala badankood iibsadaan magac domain ugu yaraan 2 sano ilaa ugu badnaan 5 sano. Intaa ka dib, waxay u socdaan cusbooneysiin kale. Marwalba waan cusbooneysiiyaa kadib 2 sano. Haddii aad u nugul tahay luminta domain, waxaad dhaqaajineysaa biil otomaatig ah Dejinta GoDaddy, tani si otomaatig ah ayey kuugu soo dalacayaan marka boggaaga uu dhacayo.
Iibsashada Domain Iyadoo Xidhmo Leh
Haddii aad tahay isticmaale cusub si aad u iibsato magac domain, Waxaan kugula talinayaa inaad tixgeliso inaad iibsato magac domain oo bilaash ah oo ku jira xirmada martigelinta. Tani waxay kaa ilaalinaysaa inaad bixiso lacag dheeraad ah. Shaki kuma jiro, markii aad u baxayso inaad wax iibsato markii ugu horreysay, waxaa laga yaabaa inaad dareentid inaad bixisay lacag dheeraad ah. Marka taasi waa sababta? Waxaan la wadaagayaa waaya-aragnimadayda waxaanan soo jeedinayaa in laga taxadaro doorashada.
Tusaale ahaan–markaad u socoto ku iibso Bluehost shirkad leh sumcad la mid ah GoDaddy. Kaliya kuugu adeegi maayaan magac domain oo bilaash ah laakiin sidoo kale shahaadada SSL oo leh astaamo badan oo isla qiimahaa aad ka helayso GoDaddy. Sidaad ogtahay, Mid ka mid ah astaamaha– Shahaadada SSL maalmahan waxay noqotay mid lama huraan ah. Waxaa loo arkaa cunsur darajo. Eeg shaashadda soo socota.
Intaas waxaa dheer, Waa inaad hubisaa in magaca domainka uu ahaado .com bartilmaameedka caalamiga ah wuxuuna noqon karaa wadan u gaar ah domain sida haddii aad bartilmaameedsaneysid India markaa waa inaad qaadataa .in, Australia waa inaad iibsataa .com.au, si la mid ah Boqortooyada Midowday way fiicantahay in la iibsado .co.uk qiimeynta hore.
Halkan waxaa ku yaal wax adiga kuu fiican, haddii aad ku dhowdahay maalinta dabaaldegga sida Kirismaska, madow Jimco. Tani wax badan ayey kaa caawinaysaa. Qiimaha domainku wuu ka duwan yahay waqtiyada kala duwan ee sanadka. Tusaale ahaan– maalinta Jimcaha Madow, waxaad si fudud uga faa'iideysan kartaa ilaa 70% ka baxsan. Halka maalmo caadi ah, waxay kugu soo dalacayaan qiimayaasha qiimaha is beddelaya.
Marka laga reebo tan, isticmaaleyaal badan ama kuwa cusub ayaa hela qiimaha GoDaddy ee sarreeya marka la barbardhigo. Halka shirkadaha kale ee martigaliya ay bixiyaan dhowr astaamo oo isku qiimo ah. Qaar kale waxay doorbidaan inay iibsadaan domain ka GoDaddy iyo martigelinta adeegga mid kale.
Gunaanad Ka soo iibso Domain GoDaddy oo aad leedahay: Kaliya maaha domains ka yimid Godaddy laakiin sidoo kale adeeg bixiyeyaasha kale ee la midka ah waligood waxay ku siinayaan lahaansho rasmi ah degel gaar ah. Laakiin waad isdiiwaangalin kartaa ilaa ugu badnaan 10 sano. Intaa ka dib, waa inaad cusboonaysiisaa. Bloggers ama milkiilayaasha bogagga waxay u muuqdaan inay ka hortagaan diiwaangelinta domain muddo dheer. Runtii runtii wax badan baa ku baxay. Inta lagu jiro hal mar, waxay cusboonaysiiyaan ugu badnaan 5 sano.
Post HoreMiyay tahay inaan ka iibsado SSL martigaliyahayga?
Post NextSida Loo Sameeyo Degel Ka Dib Iibsiga Magaca Domain?
Ma u Baahan Tahay Magac Domain Loogu Talo Galay Blog?
Juunyo 4, 2021